कसरी भएको थियो व्यवसायी श्रेष्ठको अपहरण र हत्या - अपराध - साप्ताहिक
कसरी भएको थियो व्यवसायी श्रेष्ठको अपहरण र हत्या
सुन्दर युवतीप्रतिको आशक्ति कसैका लागि वरदान बन्छ त कसैका लागि अभिशाप । दाङका एक धनाढ्य व्यवसायीका लागि २१ वर्षीया सुन्दरीको मोहजालमा लठ्ठिनु जीवनकै सबैभन्दा ठुलो अभिशाप सावित भयो । युवतीको पछि लागेर डेटिङ हिँड्दा उनले आफ्नै ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
घटना हो जेठ २६ गते बेलुकाको । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५, बसपार्कस्थित बुटवल वस्त्रालयका सञ्चालक ५३ वर्षीय राजकुमार श्रेष्ठ रोटरी क्लब तुलसीपुरको बैठकमा थिए । फोन आयो, उनी बाहिर निस्किए । प्रायः राति अबेरसम्म साथीभाइसँग रमाइलो गर्दै बस्ने बैठक उक्त दिन छिट्टै समापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव श्रेष्ठले नै राखे । श्रेष्ठले भने, ‘आज मेरो जरुरी काम पर्यो । बैठक छोटो गरौं है ।’ उनी हतार–हतार घर गए । घरमा काम गर्ने मानिसहरू मात्र थिए । श्रीमती माइत गएकी थिइन् । श्रेष्ठ म बेलुका अबेर आउन सक्छु भन्दै बा ११ च १०७१ नम्बरको फोर्ड कम्पनीको सेतो रंगको निजी इकोस्पोर्ट कारमा घरबाट बाहिरिए ।
रोटरी क्लबको बैठकमा रहेका बेला उनलाई फोन गर्ने युवती थिइन् तुलसीपुरकै पूजा घर्तीमगर । उनले श्रेष्ठलाई बैठकमै रहँदा फोन गरेर ‘आज सल्यानतिर घुम्न जाऔं, आउनुहोस्’ भनेकी थिइन् । घर्तीको फोन आएपछि श्रेष्ठ हतार–हतार बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
श्रेष्ठले घर्तीलाई तुलसीपुर–सल्यान सडकखण्डअन्तर्गत टेलिकमको कार्यालयभन्दा केही माथि आफ्नो गाडीमा चढाएका थिए । त्यसपछि उनी घर्तीसँग सल्यानतिर लागे । उनीहरू सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका–५ मेलखोला नजिक पुगेपछि श्रेष्ठको अपहरण गरिएको थियो । बाटोमा गाडी रोकेर हातहतियार देखाई उनको गाडीलाई मुख्य सडकबाट भित्री कच्ची सडकमा लगिएको बताइन्छ ।
को हुन् पूजा ?
व्यवसायी श्रेष्ठको अपहरणपछि भएको हत्याले पूजालाई सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले आकर्षक जीउडालकी गोरी पूजाको फोटो राख्दै केटीहरूदेखि सावधान लेखिएका पोस्टहरूसमेत सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तुलसीपुरका एक प्रतिष्ठित व्यवसायीको अपहरणमा संलग्न ती युवती खासमा को हुन त ?
प्रहरीले उनको उमेर १७ वर्ष भनेर सार्वजनिक गरे पनि उनको खास उमेर २०-२१ वर्ष भएको बताइन्छ । तुलसीपुरमा १२ कक्षासम्म अध्ययन गरेकी पूजाको तडकभडक केही समययता निकै बढेको जानकारहरू बताउँछन् । पूजा अध्ययन वा कामभन्दा रंग–रमितामा रमाउन थालेकी थिइन् । केही समयअघि उनले सल्यान कालीमाटीका एक युवकसँग विवाह गरेकी थिइन् भने राम्रै रकम लिएर उनले ती युवकसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको बताइन्छ । पूजा ब्युटिपार्लरमा काम गर्थिन् र निकै मोजमस्तीपूर्ण जीवन बिताउँथिन् । साथीहरू उनको प्रगति देखेर अचम्मित थिए । उनी विभिन्न मेला महोत्सवहरूमा नृत्यसमेत गर्थिन् ।
पूजाको व्यवहार केटाहरूसँग संगत बढाउने र अप्ठेरोमा पारेर रकम असुल्ने खालको थियो । उनले यसबीच पनि धेरै पुरुषसँग संगत बढाएर रकम लिएको बताइन्छ । ब्युटिपार्लरमा काम गर्न थालेदेखि उनी व्यवसायीहरूको सम्पर्कमा पुगेकी थिइन् । पूजा व्यवसायी श्रेष्ठसँग करिब डेढ बर्षदेखि नै सम्बन्धमा रहेको निकटस्थहरू बताउँछन् । पूजाको अधिकांश खर्च श्रेष्ठले नै धानिदिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
पूजाको श्रेष्ठसँगको सम्बन्ध थाहा पाएका सल्यानका मानबहादुर भण्डारीले नै पूजालाई प्रयोग गर्ने तानाबाना बुनेका थिए । भण्डारीले पूजामार्फत श्रेष्ठको सम्पत्ति र व्यवसायका बारेमा विस्तृत जानकारी लिएका थिए । श्रेष्ठसँग कुस्त सम्पत्ति रहेको र दिनमै लाखौंको कारोबार हुने कुरा थाहा पाएपछि भण्डारी र पूजाका बुवा टीकाराम घर्तीले ३ करोडसम्म असुल्ने योजनाका साथ पूजालाई मोहरा बनाएर उनको अपहरण गरेको बताइन्छ ।
सेनाका पूर्वहवल्दार टीकाराम
पूजाका बुवा टीकाराम नेपाली सेनाका पुर्वहवल्दार हुन् । घर्ती अवकाश पछि जापान जाने तयारीमा थिए । गाउँघरमा उनले जापान जाने प्रक्रियामा आफ्नो १० लाखभन्दा बढी रकम फसेको बताउने गरेका थिए । त्यही रकम असुल्न उनले व्यापारी अपहरणको योजना बनाएको बुझिन्छ ।
टीकारामले सल्यानका मानबहादुर भण्डारीको सल्लाहअनुसार अपहरणमा सहभागिता जनाएका थिए । व्यवसायी श्रेष्ठसँग पूजाको सम्बन्ध थाहा पाइसकेपछि भण्डारीले अपहरणमा पूजालाई नै प्रयोग गर्ने योजना बनाए । पूजाले बोलाए श्रेष्ठ आउने पक्का भएपछि भण्डारी, घर्तीलगायत भाडामा ल्याइएका अन्य युवाहरू सल्यानमा बाटो ढुकेर बसेका थिए । पूजाले बाटोमा उनीहरू कहाँसम्म पुगे म्यासेज गरिरहेकी हुन्थिन् । सल्यान पुगिसकेपछि श्रेष्ठ अपहरणकारीको पञ्जामा परे ।
सजिलै फुत्किइन् पूजा
पूजाको काम श्रेष्ठलाई सल्यानसम्म पुर्याउने मात्र थियो । उनी श्रेष्ठलाई सल्यान पुर्याइसकेपछि त्यसै दिन राति नै तुलसीपुर फर्किसकेकी थिइन् । घटनामा आफ्नो सहभागिता कसैलाई थाहा नहुने आशामा उनी घरमै बसिन् । भोलिपल्ट श्रेष्ठ अपहरणको हल्ला चलेपछि प्रहरी व्यापक रूपमा परिचालित भयो । घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट श्रेष्ठलाई सल्यानसम्म पुर्याउने पूजा भएको कुरा थाहा भयो ।
जेठ २७ गते राति इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरबाट प्रहरी टोली पूजाको घरमा पुग्यो जहाँ पूजाकी आमाले उनी दुई दिनदेखि घरमा नभएको बताइन् । प्रहरीले घर खानतलासी गर्ने प्रयास गर्यो तर उनले प्रहरीलाई घरमा पस्न दिइनन् । उल्टै प्रहरीलाई धम्काइन्, ‘महिला मात्र भएको घरमा राति–राति पस्न खोज्ने ? तिमीहरूको के चाला हो यो ? म गाउँलेहरूलाई बोलाएर तिमीहरूको बेइज्जत गर्दिऊँं ?’
पूजा घरमा नभएपछि किन बबाल गर्नु भन्ने सोचेर प्रहरी ब्याक भयो । हो–हल्ला हुन थालेपछि प्रहरी त्यहाँबाट फर्किएको थियो । त्यसपछि घरमै रहेकी पूजा मोबाइलको स्वीच अफ गरेर फरार भइन् । प्रहरी घरमै रहेकी पूजालाई पक्राउ गर्नबाट चुक्यो । त्यसैले पनि प्रहरीलाई अन्य अभियुक्त पक्राउ गर्न लामो समय लाग्यो ।
ब्यवशायी श्रेष्ठकोहत्याका अभियुक्तहरुलाई सार्वजनिक गर्दै प्रहरी र इन्सेटमा श्रेष्ठ
जेठ २६ गते राति अपहरण गरेपछि श्रेष्ठलाई रातदिन जंगलको बाटो हिँडाइयो । मुख्य योजनाकार भण्डारीले श्रेष्ठलाई आफ्नो घर नजिकैको जंगलसम्म पुर्याइदिन भनेका थिए । त्यसकारण अपहरणमा संलग्न भाडाका युवाहरूले श्रेष्ठलाई जंगलको कठिन बाटो हिडाए । उनलाई २९ गतेसम्म लगातार ३ दिन जंगलको बाटो हिँडाइयो ।
मधुमेहका रोगी श्रेष्ठ औषधी र उपयुक्त खानपिनबिना कठिन बाटो हिँड्नुपरेपछि बाटोमै थलिए । अपहरणकारीले १० किलो चिउराबाहेक अरू केही बोकेका थिएनन् । बाटोमा त्यही चिउरा खान दिन्थे । हिँड्ने क्रममा श्रेष्ठ ठाउँ–ठाउँमा लडेका थिए फलस्वरूप उनको शरीरमा चोट लागेको थियो र अन्तमा उनी बिरामी नै परे । अब अपहरणकारीलाई अप्ठ्यारो प¥यो । श्रेष्ठलाई लामो समयसम्म हिँडाउन कठिन भयो । २७ जेठदेखि नै प्रहरी सल्यानको जंगलमा छ्याप्छ्याप्ती भैसकेको थियो । प्रहरीले सकेजति जनशक्ति परिचालन गरेको थियो ।
प्रहरीको सक्रियताका कारण अपहरणकारीहरूलाई श्रेष्ठलाई लामो समय हिँडाइराख्न सम्भावना भएन । त्यसपछि श्रेष्ठको एउटा आवाज रेकर्ड गराएर उनको हत्या गर्ने योजना बन्यो । उनीहरूले यस्तो आवाज रेकर्ड गराए– ‘म ठिक छु । उहाँहरूलाई ३ करोड रुपैयाँ दिनु ।’ त्यसपछि ढुंगाले किचेर श्रेष्ठको हत्या गरियो अनि बाक्लो जंगलको ओढारमा फ्यालियो । त्यसपछि रकम असुल्न सकिने आशामा अपहरणकारीले श्रेष्ठको घरमा फोन गरी ३ करोड रुपैयाँ मागे । घरपरिवारले श्रेष्ठसँग कुरा गरेपछि मात्र पैसा दिन सकिने बताए । अपहरणकारीले श्रेष्ठको रेकर्ड गरिएको आवाज सुनाए तर परिवारले दोहोरो कुरा नगरी केही गर्न नसक्ने जवाफ फर्काए । प्रहरीले चारैतिर घेरा हालिरहेको भान परेकाले अपहरणकारी धेरै समय उक्त क्षेत्रमा बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यसपछि उनीहरू तितरबितर भएको प्रहरीको भनाइ छ । कोही भारततिर गए भने कोही नेपालकै बिभिन्न ठाउँमा छरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसपी दिवस लोहनीले बताए । पक्राउ परेका अविरल महतराको सुचनाका आधारमा श्रेष्ठको शव फेला पारिएको एसपी लोहनीले जानकारी दिए ।
श्रेष्ठ अपहरणको २१ दिनपछि शुक्रबार सल्यानमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए । उनको शव हेलिकप्टरबाट तुलसीपुर ल्याइएको थियो । श्रेष्ठ सल्यानको छत्रेश्वरी गाउँपालिका–४ झिम्पे लेक भञ्ज्याङ जंगलमा मृत फेला परेको घटना अनुसन्धान टोली प्रमुख राप्ती अञ्चल प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानविक्रम शाहले बताए । श्रेष्ठको शव आफैं खोजेर भेटिने स्थानमा नरहेको उनले जानकारी दिए ।
श्रेष्ठ तुलसीपुरबाट जेठ २६ गते बेलुका ७ः३० बजे निस्किए पनि प्रहरीले अपहरणमा परेको जानकारी २७ गते बिहान ८ः४५ बजे मात्र पाएको थियो । जानकारी पाएलगत्तै सल्यान र दाङको प्रहरी तत्काल घटनास्थल पुगी आवश्यक अनुसन्धान थालेको थियो ।
प्रहरीले भएजति स्रोत–साधन र जनशक्ति परिचालन गर्दा पनि व्यवसायी श्रेष्ठलाई जीवित फेला पार्न सकेन । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोली समेत दाङमै पुगेर घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको थियो । प्रहरीले अपहरणकारीको स्केच सार्वजनिक गर्दै अपहरित व्यवसायी एवं अपहरणकारीका सम्बन्धमा सुचना दिनेलाई १ लाख रुपैयाँ पुरस्कारको घोषणा गरेको थियो ।
प्रहरीले आवश्यक परे हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने तयारीसमेत गरेको थियो । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि तालिम प्राप्त कुकुर तथा दक्ष जनशक्ति पनि परिचालन गरेको थियो । सल्यानको जंगलमा व्यापक खोजतलास पनि भयो । केही स्वयंसेवी युवाहरूले समेत सल्यानको जंगलमा पसेर खोजी गरे तर कतै केही फेला पर्न सकेन ।
कस्ता छन् अपहरणकारी ?
अपहरणकारीहरू पटक–पटक जेल परेर छुटेका आपराधिक पृष्ठभुमिका व्यक्तिहरू छन् । अपहरण र हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा प्रहरीले अहिलेसम्म चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेमा जंकोट–१ रोल्पा घर भै घोराही–४ बस्ने ४० वर्षीय रमेश भनिने मनबहादुर पुन, दाङको पवननगर–१ घर भै हाल तुलसीपुर–६ बस्ने २३ वर्षीय रुगत थापामगर, तुलसीपुर–१२ का २५ वर्षीय कमल भनिने अविरल महतरा तथा घोराही–१४ नयाँ बजारकी ३८ वर्षीया जमा पुन छन् ।
यसैगरी मुख्य योजनाकार झिम्पे–४, सल्यानका ३५ वर्षीय मानबहादुर भण्डारी, शान्तिनगर–२ घर भै हाल तुलसीपुर–६ बस्ने ४० वर्षीय निर्मल भनिने टीकाराम घर्ती तथा उनकी छोरी पूजा घर्ती फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । फरार अभियुक्तका सम्बन्धमा जानकारी दिनेलाई १ लाख रुपैयाँ पुरस्कारको घोषणा गरिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी धिरजप्रताप सिंहले बताए ।
श्रेष्ठसँगै अपहरित भनिएका घोराही हापुरका २८ वर्षीय रणबहादुर घर्तीको अवस्था हालसम्म अज्ञात छ । सुरुमा घर्ती पनि अपहरणमा परेको र उनी निर्दोष रहेको भनिरहेको प्रहरी अहिले भने उनीप्रति पनि सशंकित देखिन्छ ।
एचपी ११८६४८ नम्बरको भारतीय गाडीमा भारतीय व्यवसायीका साथ रुकुम जान लागेका बेला झुक्किएर अपहरणकारीले श्रेष्ठ भनेर घर्तीको गाडी रोकेको र घर्तीलाई अपहरणकारीले लछारपछार पार्न थालेपछि घर्तीले ‘मलाई चिन्नुहुन्न सोल्टी ? हामी सँगै जेल बसेको हो त’ भनेपछि पोल खुल्ने डरले घर्तीको पनि अपहरण गरिएको प्रहरीको प्रारम्भिक भनाइ थियो ।
भारतीय गाडीमा फेला परेका रवीन्द्र श्रीवास्तव, हरि श्रीवास्तव, ओमप्रसाद यादव तथा रञ्जित यादवबाट प्रहरीले घटनाको विस्तृत विवरण बुझेको थियो । उनीहरूकै भनाइका आधारमा प्रहरीले अपहरणकारीको स्केच बनाएर सार्वजनिक गरेको थियो । रणबहादुरलाई चिनेका आधारमा अपहरणकारीले उनलाईसँगै लगेको कुरा पनि भारतीय व्यवसायीहरूबाटै थाहा भएको थियो । प्रहरीले त्यही कुरालाई आधार मान्दै घर्ती निर्दोष भएको बताएको थियो ।
श्रेष्ठको हत्या भएर अभियुक्तहरू पक्राउ पर्दा पनि घर्ती सम्पर्कमा नआएपछि प्रहरी घर्तीको भुमिकाप्रति सशंकित भएको हो । एसपी सिंहले भने, ‘अपहरणकारीहरू श्रेष्ठको हत्यापछि मलाई पनि मार्छन् भनेर रणबहादुर भागेको कुरा बताउँछन् तर ऊ इमान्दार थियो भने भागेर प्रहरीको सम्पर्कमा आउनुपर्ने, घटनाका सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी दिनुपर्ने तर अहिलेसम्म बेपत्ता हुनुले उसको भुमिका पनि ठिक छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।’
श्रेष्ठ चढेको बा ११ च १०७१ नम्बरको कार तथा एचपी ११८६४८ नम्बरको भारतीय कार सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका–५ मेलखोलास्थित भित्री कच्ची सडकमा फेला परेका थिए । घर्ती पनि आपराधिक पृष्ठभुमिकै भएको एसपी सिंहले बताए । उनी यसअघि विभिन्न अपराधमा जेल परेका थिए । घर्तीले भारतबाट डोजर तथा स्काभेटर खरिद गरी नेपालका व्यवसायीहरूलाई उपलब्ध गराउने काम गर्दै आएको अनि उनी रुकुम पनि गाडीको पैसा उठाउन नै जान लागेको बताइन्छ । व्यवसायका क्रममा भारत आउजाउ गर्ने घर्तीको भारतीय आपराधिक समूहसँग सम्बन्ध रहेको प्रहरीको आशंका छ ।